N'iji anya - iko igwe mgbawa - Silicon dioxide - Felsic lava - Video
Echere bu iko nke mgbawa na-emekarị ka nkume dị egwu.
Buyzụta eke eke obsidian n'ụlọ ahịa anyị
A na-emepụta ya mgbe felsic n'onwe extruded si n'ugwu ọkụ gbazee ngwa ngwa na uto kristal. Anyị nwere ike ịhụ ndị na-ahụkarị ihe dị n'ime akụkụ nke rhyolitic. Ọ na-ahụ anya. Ebe ihe mejupụtara chemical (akwa silica ọdịnaya) na-adọta elu viscosity. Na ogo polymerization nke onwe. Mgbochi nke ikuku mpi site na nke a dị egwu. Na polymerized onwe na-akọwa enweghị enwe ngwugwu. Otú ọ dị, ndị na-ekiri ihe na-esiri ike. N'ihi ya, ọ na-agbawa ya n'akụkụ ọnụ. Anyị na-eji ya n'oge gara aga na ịkụcha ihe ma na-adọkpụ. E jiriwo ya mee ihe dịka ọkpụkpụ akpụkpọ ụkwụ.
Ihe na-ekwu okwu bụ mineral-like. Ma ọ bụghị ezi ịnweta. N'ihi na dị ka iko, ọ bụghị mkpuchi. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ọ na-eme dị oke agbanwe ka ọ bụrụ nke ịnweta. Mgbe ụfọdụ, a na-ahazi ya dịka mineraloid. Ọ bụ ezie na ndị na-ekiri ihe na-emekarị na-agba ọchịchịrị. Dị ka nkume nkume ndị dị ka basalt, ihe a na-ahụ anya dị egwu nke ukwuu. Ihe na-emekarị bụ SiO2 (silicon dioxide), na-emekarị 70% ma ọ bụ karịa.
Ọtụtụ mgbe ọchịchịrị
Ọhụụ dị ọcha na-adịkarị n'ọchịchị. Ọ bụ ezie na agba dị iche. Ọ dabeere na ọnụnọ nke adịghị. Ígwè na mgbanwe ndị ọzọ. Ọ nwere ike inye onye na-ekiri ihe na-acha aja aja na agba aja aja. Nanị ole na ole ntanetị bụ ihe na-enweghị ntụpọ. N'ime nkume ụfọdụ, ntinye nke cristobalite nke obere, nke na-acha ọcha, ma ọ bụ nke a na-agbachi agbagọ na-adabere n'ime iko ojii. Debe ihe nkwụchi ma ọ bụ snowflake: snowflake obsidian. Onye nwere ike ịchọta ihe nwere ike ịnwepụta ụdị gas. Ọ na-agbapụta site na ya. Ejikọtara ya na n'ígwé. O kere dị ka nkume a wụrụ awụ na-asọ asọ tupu a gwọọ ya. Mmetụta ndị a nwere ike ịmepụta mmetụta dị mma. Ndị dị otú ahụ dị ka onye na-acha odo odo: sheen obsidian. Nkọwa nke magnetite nanoparticles mere ka iridescence. Egwurugwu-dị ka sheen: egwurugwu na-ekpuchi anya.
Hụ na Cambodia